Mwakpo nke ọchịcha na New York site na ebili mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị ọchịcha, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ụjọ, n'ezie otu n'ime nrọ gị kachasị njọ ga-abụ n'obodo nke ha na-awakpo, nri? O yikwara ka oke okpomọkụ ahụ na-eme ka ha rụọ ọrụ, nke dị na New York enwere ọtụtụ ndị na-agaghị ekpori ndụ karịa ụbọchị ndị a.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike iche na ụmụ ahụhụ ndị a nwere mmasị na nnukwu okpomọkụ, n'eziokwu, ha anaghị achọ. N'ezie, ihe ha na-eme bụ ịchọ ebe jụrụ oyi iji chebe onwe ha pụọ ​​n'aka ha, dịka akọwara ya DNA Ama.
Na New York City na Saturday, August 13, temometa na-agụ 36,1ºC ma enwere 65% iru mmiri; na Sọnde, mercury guzoro na 33,88ºC ma enwekwa iru mmiri 50%. Iru mmiri na, dị ka prọfesọ na Mahadum Texas na Tyler kọwara, ọ na-amasị ha ma ọ bụrụ na ọ na-esonyere ya na nnukwu okpomọkụ.
Ihe na-atọ ọchị banyere ihe a niile bụ na ọchịcha anaghị efe ma ọ gwụla ma ndụ ha nọ n'ihe egwu, yabụ ọ bụrụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi adịghị mma ha ga-ala n'iyi na-achọ ebe dị jụụ; ma ha ga-eme ya naanị ọ bụrụ na ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma na iru mmiri, kemgbe nweta ume site na okpomoku di ha gburugburu, dị ka Dominic Evangelista kọwara, onye nwere Ph.D. site na Rutgers na ọkachamara na ọchịcha.
N'ihi ya, ha anaghị efe site n'otu ebe ruo ebe ọzọ iji kpasuo ndị New York na ndị njem nleta na-atọ ụtọ ezumike ha anya, kama ọ bụ naanị ebumnuche nke ịchọ nkuku ma ọ bụ nkedo nke nwere microclimate ka mma maka ha, ebe, N'agbanyeghị okpomoku na-eme ka ha rụọ ọrụ, ha na-ahọrọ iji ọtụtụ awa na ụbọchị na ebe dị jụụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Mwakpo nke ọchịcha na New York site na ebili mmiri